Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Ismaaciil Axmed Maxamuud, kaasoo ka mid ahaa arday shalay ka qalin jebisay Jaamacadda SIMAD. Ismaaciil oo ah wiil dhalinyaro ayaa qabsaday baraha bulshada, kaddib markii uu ka soo muuqday xafladii qalin jebinta, waxaa uu ka mid ahaa yahay dadka baahiyaha gaarka qaba, waxayna […]
Daawo:-Burco Taliyihii Ciidanka Wadooyinka ee Somaliland oo xalay Gaadhi Qaad maray-Video
Waxaa Magaalada Burco xarunta gobolka togdheer ka dhacay shil sababay dhimashadaÂ taliyihii wadooyiinka ee gobolka togdheer ee maamulka somaliland mr soofadhiiste, HALKAN KA DAAWO VIDEO ShilkanÂ uu ku dhintay taliyahaasi ayaa yimidey kadib markii uu dhakada kamaray baabur uwaday gaadhi qaad waxana halkaasi ku dhintay soo fadhiiste oo ahaa taliyihii wadooyinka somaliland ee burco.
Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa xilka loo magacaabay 6-dii bishii April ee sanadkii hore 2017, waxaa uu noqday Guddoomiyihii ugu daâ€™da yaraa ee soo mara Gobolka Banaadir. Taabit Cabdi Maxamed ayaa markii xilka uu la wareegay ka bilaabay tallaabadiisa koowaad eedib u habeynta shaqaalaha Gobolka Banaadir iyo sidii xuquuqdooda […]
Daawo:-Dowladda Kenya oo ku dhawaaqday inay mamnuucday dhaq dhaqaaqa mucaaradka NRM iyo Xiisad hor leh-Video
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay mamnuucay dhaq dhaqaaqa wax iska caabinta ee NRM, iyadoo ku tilmaamtay inay yihiin burcad. Arrintan ayaa ka dambeysay, kaddib markii Isbaheysiga Mucaaradka ay xilka Madaxtinimada Kenya u dhaariyeen Hoggaamiyaha Mucaaradka Raila Odinga. Dhaq dhaqaaqa la mamnuucay ee NRM ayaa qeyb ka ah Isbaheysiga Mucaaradka ee NASA ee uu hoggaaminayo […]
Daawo:-Madaxweyne Donald Trump oo xalay jeediyey Khudbadiisii Sanadlaha ahayd iyo waxyaabaha uu uga hadlay-Video
Madaxwaynaha Dalka Maraykanka Donald Trump Ayaa Jeediyey Khudbada Sanadlaha ah ee Qaranka Waxaana uu ka Hadlay Arrimo Gudaha Maraykanka ah iyo Kuwo Banaanka ah. HALKAN KA DAAWO VIDEO Donlad Trump ayaa Mudadii uu Xilka Joogay Waxaa uu Sameeyey Waxyaabo Badan oo aad loola Yaabay Waxaana Mararka Qaar La Galiyey Caafimaadkiisa Shaki Wayn.
Daawo:-Mid kamid ah Wasaaradaha Muuse Biixi oo eedo kulul dusha laga saaray-Video
Xisbiga Mucaaradka ah ee Ucid ee Somaliland ayaa eedeeyey Wasaarada Warfaafinta Maamulka Somaliland Waxaana ay ku eedeeyeen Musuq maasuq Xadhkaha Goostay Sida uu Xajiiyey Cabdinaasir Muxumed Xasan (Buuni) oo ka mid ah Xisbiga Ucid. halkan ka daawo video Maamulka Somaliland ayaa inta Badan Masuuliyiintiisa Lagu Xantaa Musuq maasuq Waxaana Dhowaan Maamulka Somaliland sheegeen inay la […]
Daawo:-Kenya oo laba Madaxweyne yeelatay iyo Xaaladda Dalkaas oo qasan-Video
Hogaamiyaha dalka Kenya Raila Odinga ayaa maanta loo dhaariyay Madaxweynaha dalka Kenya kadib munaasabad balaaran oo lagu qabtay Fagaaraha Xuriyada Uhuru Park ee magaalada Nairobi. Munaasabada lagu dhaarinayay Hogaamiyaha Mucaaradka dalka Kenya waxaa kasoo qeyb galay kumanaan taageerayaashiisa kuwaa oo ku faraxsanaa in Raila Odinga loo dhaariyo in uu hogaamiyo shacabka Kenya. Fagaaraha Uhuru Park […]
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta Dalka dib ugu soo laabtay,kadib markii uu ka qeybgalay shir madaxeedkii Midowga Afrika oo ka dhacay magaalada Addis-Ababa ee xarunta Dalka Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Waxaa ku soo dhaweeyey Garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho, masâ€™uuliyiin kaladuwan oo ka tirsan Dowladda Soomaaliaya. Wasiirka arrimaha dibadda […]
Daawo:-Odayaasha Berbara oo ku dhagan Wasiirka Biyaha Mamulka Somaliland iyo Sabab yaab leh-Video
Odayaasha Gobalka Saaxil oo maanta Shir ku qabtay Magaalada Berbera aaa eedayn iyo su,aalo adag waydiiyey Wasiirka Biyaha Maamulka Somaliland Saleebaan Koore oo sida ay sheegeen Ceelal dano shikhsi ah ka wada Degaanadooda. HALKAN KA DAAWO VIDEO
Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Puntland oo Miino kula kacday Gobalka Bari-Faah Faahin
Wararka ka imaanaya gobolka Bari gaar ahaan degaanka Sugurre ee duleedka Magaalada Boosaaso ayaa waxay sheegayaan in qarax Miino lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland kuwaa oo saarnaa gaari nooca dagaalka ah. Miinada oo la sheegay iney dhulka ku aasneyd ayaa wararku waxay sheegayaan in lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidanka Puntland, waxaana […]